Posted by ညီလင်းသစ် au 23.3.11
မိခင်မေတ္တာတွေပဲ ခံစားဖတ်နေရတာ၊ အခုလို ဖခင်မေတ္တာကို ဖတ်ရတော့ နွေးထွေးတဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ စောက်ရှောက်မှု့၊ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာကို ပြန်မြင်မိတယ်။
ဖေဖေက နန္ဒာ့ကို ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် သူ့ရဲ့ little girl ပဲလို့ အမြဲပြောတယ်။ အဲလို "Daddy's little girl" ဖြစ်ရတာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်အောင် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိကြတဲ့ ဖခင်တွေအားလုံး စိတ်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
သားသားကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်လိုက်ပါပဲ
ခုလဲ သားသားဓာတ်ပုံများပါလေမလား လာကြည့်ရင်း စာဖတ်တာ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ သန္တ ရသ ကို ခံစားသွားတယ်
Peace be with you & your family... Bro
Cet essai est si touchante, qui me fait manquer mon père, ma mère, et mon école maternelle.
ကျွန်မသားလည်း သူ့အဖေကြိုတာကိုပိုကြိုက် တယ်။ အဖေနဲ့ ဆို ပျော်နေတာပဲ။ သူ့အဖေကပြောလို့မရရင် “မာမားကိုကြောက်တယ်” ဆိုပြီးလှည့်ခြောက်တယ်။ သားကပါ “ဟုတ်တယ် မာမားကို ကြောက်တယ်နော်” တဲ့၊ သူတို့ကအဲလိုဖြစ်နေကြတာ။
သားလေး ပုံပါရင်တာ့ သာကောင်းပေါ့။
အစ်ကိုစာရေးပုံက ဖတ်နေတဲ့သူပါ ရေးသူပုံဖော်တဲ့မြင်ကွင်းကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်စေတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီက ကလေးတွေ ငယ်ငယ်နဲ့ မိဘလက်လွှတ်လို့ရတာ ဖြစ်မယ်နော်
Pre father day post.I feel like going into hearts of fathers.You are the"hin lay oh" giving us both"ratha and thuta"I happily flow the stream of your dad and son relation while i'm reading.Write about ma eai thu's daily routine pls:)
သားသားလေးကတော့ ပျော်နေမှာပဲနော် အကို။
ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ကြည်စယ်ပုံတွေကို သဘောကျကြည်နူးစိတ်နဲ့ ပြုံးပြီးဖတ်နေမိတယ်. မျက်နှာကြောတွေတောင် အတော်လျော့သွားတယ်.. စိတ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ပြီးတော့ ခုလို ရဲရင့်ထက်မြက်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ဖခင်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းခွင့်ရတာ ကံကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးနေမိတယ်..
ကမ္ဘာပေါ်က ကလေးတွေအားလုံး ခုလိုကံကောင်းရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်..
ဖခင် မေတ္တာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အရေးအသားလေးတွေ၊ စကားလုံး လှလှလေးတွေနဲ့ ပို့စ်လေးမို့ ဖတ်ရတာ နှစ်သက်လိုက်တာ။ ပာုတ်တယ်နော်... ကလေးတွေမှာ အဲ့ဒီလို သူတို့ မခွဲမခွာ ဆောင်လေ့ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုစီ ရှိကြတယ်နော်။ အဖေနဲ့သား တစ် နှစ် သုံး ရေတွက်တဲ့ နေရာလေး ရောက်တော့ ကြည်နူးပြီး ပြုံးမိတယ်း)
သားနဲ့ သူ့ ရဲ့ ဒူးဒူးကိုတွဲရက် ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ မြင်ဖူးချင်တာ :)
ငယ်ငယ်ကတည်းက စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားရင်
ခပ်သုတ်သုတ် ဖတ်သွားတယ်။ စကားလုံးတွေက မြင့်လွန်းတော့ ခုံခုပြီး မှီဖို့ ခုံသွားရှာလိုက်ဦးမယ်... အချိန်ရမှ ခုံဆွဲပြီး ပြန်လာမယ်.. :D
သမီးကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရတာ နန္ဒာ သိပ်ကံကောင်းတာပေါ့...၊
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ကျနော်အမြဲတင်နေ ကျဆိုတော့ နောက်လည်း ဆက်တင်ဖြစ်ဦးမှာပါပဲ...၊
Merci bien pour ton compliment..!
အဖေနဲ့သားက တဂိုဏ်းဖြစ်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား..၊း)
ဓါတ်ပုံတွေ မပြလည်း ကျနော်ပြောချင်တာကို မြင်တယ် ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ...၊း)
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ မြင်ချင်တာပါပဲ...၊
အဲဒါလည်း ဟုတ်မယ်ဗျ၊ အများစုက ကိုယ့်ခြေထောက် ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးခံရ တာဆိုတော့....၊
Thanks for your kind comments! I also noted down your suggestion about Ma Eain Thu and will see to it. :)
ကလေးတိုင်းသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကြီးပြင်းခွင့် ရခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီးလည်း အခုထက်ပိုပြီး ကျန်းမာလာမှာတော့ သေချာတယ်နော်....၊
တစ်နှစ်သုံးကတော့ အခုတလော မကြာခဏကို ရေတွက် နေရတော့တာပါပဲဗျာ....၊း))
အဲဒီလိုမျိုး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ဖူးလားလို့ ပြန်ရှာကြည့် လိုက်ဦးမယ်နော်...၊း)
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အခြေခံ အုတ်မြစ်တွေပါပဲ...။
လာခဲ့..လာခဲ့.. ခုံကော၊ ခွေးခြေကော၊ ကုလားမ ခြေထောက်ကော တွေ့တာသာ အကုန်ဆွဲယူခဲ့ဗျာ..၊ :D
ဖခင်မေတ္တာ ရိုးရိုးလေးကို အဖွဲ့ကောင်းသူမို့ ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာလေးပါ...။ ကျောင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေပုံလေးတွေပါရင် ပို ပြည့်စုံသွားမှာ :)
ပို့တစ်ပုဒ်လုံး အစကနေအဆုံးထိပြုံးပြီးဖတ်နေတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလို့ဗျာ...။ သားနဲ့သူ့ရဲ့ ဒူးဒူး ကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်... ကလေးဘ၀သိပ်အပြစ်ကင်း ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ..။ အသက်တွေကြီးလာတော့ အခြေနေတွေအချိန်အခါတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေနည်းလာတော့တာပဲ။
သားလေးက ကျောင်းပျော်တယ်ဆိုတော့ လိမ္မာလိုက်တာ...
အဲ့ဒီက ခလေးတွေက ဒါကြောင့်လည်း ထက်မြက်နေကြတာကိုး အသေချာကြီးကို ဂရုတစိုက်ပေးထားတာပဲ သားလေး အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ ကြီးပြင်းခွင့်ရတာ ၀မ်းသာစရာ ။
အစ်ကိုတို့ မိသားစု ၃ ယောက် ညနေကျောင်းပြန်ချိန်လေး မြင်ယောင်ပြီး ကြည်နူးမိသွားတယ် ။ မနေ့တည်းက ဖတ်ပြီးသားပါ စကားလုံးတွေ မမှီလို့မဟုတ်ပေမယ့် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတာလေး သေချာမမန့်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ ။ သားက အဖေကိုကြွားချင်လို့ စက်ဘီးကို ပြန်လှည့်နင်းပြသွားတာလေး ဖတ်ရတော့ ကျနော် အငယ်ကအကြောင်းလေး ပြန်သတိရသွားတယ် စက်ဘီးတက်ခါစ အမေ့ကိုကြွားချင်လို့ အမေ့ လို့ အော်ခေါ်ပြီး နင်းပြမှ ဘိုင်းခနဲပစ်လဲကျတား)
အစ်ကိုတို့ သားအဖ ၁၂၃ လေးရယ်တာ သဘောကျတယ်း) နှစ်ခွဲရှိသေးလို့ပါ အစ်ကို့စာရေးပုံလေး မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်လိုက်တော့ ရက်ပါ သားအဖကိုတွေးပြီး ပြုံးမိပါရဲ့ ။
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ်တာတွေဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ အစ်ကို ဒါမျိုးပို့စ်လေးတွေ များများဖတ်ခွင့်ရချင်ပါ၏
ကျေးဇူးပါ၊ အဲဒီလို ပုံလေးတစ်ပုံရဖို့ ကျနော် ကြိုးစား လိုက်ဦးမယ်ဗျ....၊
ဟုတ်တယ်၊ ကလေးအများစုရဲ့ ဘဝတွေက တကယ်ပဲ အပြစ်ကင်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်၊
ကြည့်ရတာ ဟိုးငယ်ငယ်ကတည်းက တက်ခဲ့တော့လည်း ကျင့်သားရသွားပုံ ပါပဲ...၊
အမေကို ကြွားချင်ကာမှ စက်ဘီးလဲကျတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိုးရွာထဲမှာ ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ စက်ဘီးစီး ရင်လည်း ဘိုင်းကနဲ လဲကျတတ်သေးတယ် ထင်တယ်နော်..၊ ;-) တကူးတကန့်ကို ပြန်လာပြီး သေသေချာချာ မန့်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ညီရေ...။
ညီလင်းရေ.. ကျောင်းဝန်းကျင်က ကလေးတွေကို လက်တွေ့ဘ၀ကို လက်တွေ့ကျကျသင်ပေးတာ..ဆိုတဲ့ အယူအဆကို သဘောတူပါတယ်..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အမပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပတ်က လုပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်လေး http://maynyane-literature.blogspot.com/2011/03/blog-post_13.html
သားသားကိုင်တဲ့ဒူးဒူး ကို လျော်စက်ထဲထည့်လျော်မယ်ဆိုရင်ရော သူက ကြိုက်ရဲ့ လား . ဒီကခလေးတွေလည်း အဲလိုဘဲလေ ဒူးဒူး လေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ နောက်ပြီး လျှော်ရင် သူတို့က မကြိုက်ချင်ကြဘူး .. ကျမသမီးကတော့ ခုချိန်ထိ သူကြိုက်တဲ့ဒူးဒူးက fleece အသား နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ချုံစောင်ဘဲ .. အဲဒါလေးကိုင်ပြီးသူက လက်မလေး ပါးစပ်ထဲထည့်စုပ်တတ်သေးတယ် ခုချိန်ထိညဖက်အိပ်ရင် လက်စုပ်တတ်တုန်း .. အမေလုပ်သူက တခါတခါ လျှော်တိုင်း သူက အမေ့ကို လျှော်လိုက်တဲ့အတွက် အဲ စောင်က အနံ့မရှိတော့ဘူးလို့ကွန်ပလိမ်း တက် တတ်တုန်း .... :)
ရသမြောက်တယ်ဗျာ ရေးတာတွေ ကြိုက်ပါတယ်
ဖတ်နေရင်းကို စိတ်ထဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ရှင်းနေတာပဲ . နောက်ထပ် ဆက်ဖတ်ပါဦးမယ်ဗျာ ..
ဟုတ်ကဲ့.. ကျနော် လာနားထောင်ပါဦးမယ်...။
အဟုတ်ပါပဲဗျာ၊ သူ မကြိုက်လို့ ဒူးဒူးကို သူမသိအောင် ခိုးပြီး လျှော်ရတယ်၊ သားကတော့ လက်မ မဟုတ်ဘူး၊ ချိုလိမ်...၊း)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ အဆင်ပြေတဲ့အခါ လာသာ လာလည်ပါ...။
အသက်တစ်နှစ်ကျော် တူမကလေးတစ်ယောက်လည်း သူ့စောင်လေးကို သိပ်ကြိုက်လို့ အပြင်ကိုထုတ် ခြုံလိုက် နမ်းလိုက် သိပ်လုပ်တယ်။ မကြာခဏ လျှော်ပေးရတယ်။ Peanuts ကာတွန်းထဲက Linus လေးလိုပေါ့။ စောင်ကြိုက်တဲ့ကလေးတွေက စိတ်ထားနူးညံ့တယ်လို့လည်း ကြားဖူးတယ်။
မြင်သမျှ အရာရာကို အတုယူနေထိုင်နေကြတဲ့ ကလေးဘ၀တွေမှာ လူကြီးတွေလိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုသွင်းတာထက် လူသားဆန်ဆန် ပျော်ရွှင်စရာ အနာဂတ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့နော်။
အဖေကို ရထားတဲ့သားသားလေးရဲ့ ဘဝက ကောင်းသော
ဘဝကို ရမှာအသေအချာပါပဲ....။ဒီနိုင်ငံက KGကျောင်း
လေးတွေကို မြင်ရတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို ကျောင်းမျိုး
ကပို ကောင်းမယ်ထင်ရဲ့..။ငယ်ငယ်က အကြောင်းကြောင်း
တွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်တွေရခဲ့တော့ ကလေးတွေကို အဲလို
အခု ထက်မြက်ရဲရင့်ပြီး ကလေးပီသတဲ့ ကလေး လေးတွေ
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဖတ်ရတာ ငြိမ့်နေတာပဲ။
အဖိုး အဖွား ဦးလေး အဒေါ်တွေ ဝမ်းကွဲ ညီအကို မောင်နှမတွေ စတဲ့ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း စုံစုံလင်လင်ကြားမှာ ကြီးပြင်းခွင့်မရ၊ တနေ့ တနေ့ ဒီ အဖေရယ် အမေရယ် ဒီသားလေးရယ် သုံးယောက် တယောက်မျက်နှာ တယောက် ကြည့်နေကြရတဲ့ ဘဝတွေ အများကြီးရယ်... ဒီတော့ ကလေးတွေအတွက် လူမှုရေးရာတွေ အစုံစုံကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ နေရာတခုဟာ မရှိမဖြစ် လိုကို လိုအပ်နေတယ်...။
တခါတခါမှာ ကလေး ငယ်ငယ်လေးကို မနက်အိပ်ရာက မနိုးတနိုး အတင်းဆွဲယူပြီး ကျောင်းပို့ရတဲ့ အဖြစ်ကို အတော်လေး နာကျင် ခံစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလို ကျောင်းထားလိုက်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ အိမ်မှာပဲ အဖွားတွေ အိမ်ဖေါ်တွေနဲ့ နေပြီး ကျောင်းမတက်တဲ့ ကလေး ယှဉ်လိုက်ရင် mature ဖြစ်ပုံခြင်း တော်တော်လေး ကွာတာ တွေ့ရတယ်...
အိမ်က သားငယ်ငယ်က ဒူးဒူးကတော့ Mr. Bean ထဲမှာ တွေ့နေကျ ဝက်ဝံရုပ် အညိုရောင်ကလေးပါ။ ပေါက် ပြဲ ဟောင်းနွမ်းနေပြီး အခု လူပျိုပေါက်လေး ဖြစ်နေတဲ့အထိ လွှတ်ပစ်ဖို့ ပြောရင် မကြိုက်ချင်ဘူး... သိပ်ရယ်စရာကောင်းတယ်...း))